Matipi gumi ekugadzira Chibvumirano Chekubudirira Chibvumirano | Mutemo Makambani Dubai
Wepamusoro gumi Matipi Ekugadzira Chibvumirano Chekubata Chibvumirano
Kuchengetedza Bhizinesi Rako uye Mutengi Wako
Chibvumirano chekuchengetedza igwaro repamutemo rinodzivirira iwe nemutengi wako kubva pakukandirwa mukukonana. Paunopinda muchibvumirano nemutengi, kunyanya mumwe munhu wawanga uchishanda naye kwechinguva, ungangodaro usazoda kufunga nezve mukana wehukama hwacho husingaite.
Zvinhu zvinogona kunge zvichifamba mushe nemutengi zvekuti haugone kufungidzira mamiriro pavanomira kudaro. Nehurombo, kune nzira dzakawanda zvinhu zvinogona kuenda kumaodzanyemba panguva yekuita kwako, uye iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kubata zvinhu kana izvi zvikaitika. Imwe nzira yakakosha yekugadzirisa ingangoita makakatanwa ndeyekudzidza maitiro ekugadzira chibvumirano chekuchengetedza.
Chibvumirano chakachengetedzwa zvakanaka chekuchengetedza chinofukidza zvese zvakakosha zvehukama hwebhizinesi rako nemutengi wako uye zvinopa nzira yekubuda kwauri kana paita kupokana. Zvibvumirano zvekuchengetedza zvine zvakawanda zvakanaka, zvatakakurukura mune ino posvo.
Kunze kwezvikomborero izvi, chibvumirano chekuchengetedza chinokubatsira kusarudza kumberi kuti ndeipi nzira yekugadzirisa gakava yaungade kushandisa kana gakava rikamuka pakati pako nemutengi wako. Asi chii chinofanirwa kuverengerwa muchibvumirano chekuchengetedza?
Chinyorwa ichi chinokurukura matipi gumi epamusoro anogona kukubatsira iwe kugadzira chibvumirano chekuchengetedza uye kuti ungadzivirire sei bhizinesi rako uye mutengi wako nechibvumirano chako chekuchengetedza.
Kuchengeta Chibvumirano Chibvumirano
Zvibvumirano zvekuchengetedza chikamu chakakosha chevakawanda, kana zvisiri zvakanyanya, hukama hwepamutemo. Kubva kumakambani kuenda kumhizha kusvika kumachiremba, munhu wese anoda magwaro mashoma ekushandira paanopinda muchibvumirano, uye aya ndiwo magwaro anoshandiswa kugadzira chibvumirano chekuchengetedza.
10 matipi ekugadzira yakabudirira bhizinesi chengetedzo chibvumirano
1. Kukosha: chii chaunenge uchiitira mutengi?
Chibvumirano chekuchengetedza chakasiyana nemamwe marudzi emakondirakiti mune kuti panzvimbo yekubhadhara basa raitwa, mutengi anobhadhara vimbiso yebasa kuti riitwe. Nekudaro, zvinofanirwa iwe se freelancer kuita kuti mutengi aone kukosha kwekusaina chibvumirano chekuchengetedza newe.
Sezvo zvinobatsira sekuwana basa pasi pekuchengetedza iri, hazvisi nyore kuwana. Iko kunowanzo kuve nechipingamupinyi chemu freelancer kusahadzika kupa zano rekuchengetedza kune mutengi kana kutadza kutaura kuti nei muchengeti achikosha kumutengi. Nekudaro, zvingave zvakanaka kuti uone kukosha kwaunenge uchipa mutengi wako pavanosaina chibvumirano chekuchengetedza newe.
Kuti upindure mubvunzo wekukosha, unofanirwa kuona masevhisi auchange uchipa mutengi nguva dzose.
2. Ita legwork: nzwisisa mutengi wako.
Kunze kweichi chiri chiitiko chebhizinesi chakanaka, zvine hunhu, uye zvinoenda kure kure kuona kuti uchaita basa rakawanda sei usati wawana mutengi kusaina newe. Usati waisa chibvumirano chekuchengetedza pamwe nemutengi, shandisa nguva uchivanyengedza ivo nebhizinesi ravo.
Nzwisisa mashandiro anoita bhizinesi uye uone nzvimbo dzinogona kubatsira masevhisi kufambira mberi kwavo bhizinesi. Kana iwe ukasangana nemutengi uye ukaratidza huwandu hweruzivo nezve bhizinesi ravo, kusanganisira nzvimbo dzinogona kuitwa nesevhisi dzako kuti dzive nani, waita zvinopfuura makumi mashanu kubva muzana echinangwa
3. Pfura pfuti yako: zvidzike kune mutengi
Paunojekesa kuti ndeapi masevhisi aunoda kupa uye kuti mutengi achabatsirwa sei, inguva yekutengesa mutengi pane anochengeta. Unogona kuita izvi neimwe yenzira mbiri:
Pakutanga kwehukama hwako nemutengi, kana uchikumbira kuita rimwe basa renguva dzose. Iwe unogona kutsvedza musarudzo yechibatiso chekuchengetedza kana uchinge wapedza kubudirira basa.
Pakupera kwechibvumirano basa, kana uchienda-kuregedza mutengi. Parizvino, iwe ungadai wakave nekunzwisisa kuri nani pane zvemutengi zvinodiwa zvebhizinesi. Nekudaro iwe unogona kupa zano rekutsigira iro basa iwe uchangopedza kana kupa imwe yekuwedzera kukosha kumutengi.
4. Dhirowa chibvumirano: sarudza chimiro chaunoda kushandisa
Izvi zvakakosha kubva mumaonero ekutonga nguva. Izvo zvaizobatsira kana iwe ukafunga kuti iwe unoda kushanda sei nemutengi. Unogona kuita izvi mune imwe yeanotevera nzira:
Iwe unogona kuita kuti mutengi abhadhare yakapihwa huwandu hwemari mwedzi wega wega kune yakawiriranwa-pane yakawanda nguva. Ziva kuti iwe unofanirwa kuperetera zvinoitika kana, nekuda kwechimwe chikonzero, usina kushandisa nguva yese yakatarwa, kana iwe ukapedza inopfuura iyo nguva mumwedzi wakapihwa.
Iwe unogona kuita kuti mutengi abhadhare seti yakapihwa yekuendesa. Chibvumirano chinofanira kutaura zvinoitika kana ukapfuura huwandu hwakatenderanwa-hwebasa uye chii chinoitika kana dambudziko rikamuka newe. Ndiani anobata basa muzviitiko zvakadaro?
Iwe unogona kuita kuti mutengi abhadhare kuti ave nekuwana kwauri. Izvi, zvakadaro, zvinogoneka kana uri nyanzvi inotsvakwa mumunda mako.
5. Tsanangura zvinounzwa uye nemazuva ekushandira avo
Mushure mekusarudza marongero achatora chibvumirano chako chekuchengetedza, unofanirwa kuona kukura kwebasa uye kuti mutengi anofanira kutarisira kuti basa riendeswe. Ive neshuwa yekutaura izvi nenzira yakajeka, sekusanzwisisika zvinongokuisira iwe kune imwe musoro pasi pemugwagwa.
Paunenge uchitaura izvi, iwe unodawo kuona kuti chii chinoitika kana mutengi achikumbira basa rinoenda kupfuura chiyero chemuchengeti. Tsanangura zvichaitika kuti mutengi azive zvinotarisirwa.
Chibvumirano chako chekuchengetedza chinofanirawo kusanganisira nguva dzakatarwa. Sarudza kuti kangani iwe uchaendesa pane zvaunogona kupa uye uve nechokwadi chekuti iwe unonamira kune yakatarwa nguva.
Ichi chikamu chakakosha muchibvumirano chako chekuchengetedza. Iwe unofanirwa kusarudza kuti iwe unoda kupihwa mari uye kangani. Heano mazano mashoma aunofunga.
Kukumbira mubhadharo mubhadharo kumberi kwenguva yebasa
Kubhadharwa pamwedzi - sekunyorera
Iyo inochinjika yekubhadhara purogiramu inoenderana nebasa rakawanda raunounza mumwedzi
7. Kugadzirisa nguva yako
Vamwe vatengi vanotora chibvumirano chekuchengetedza kureva kuti mupi webasa anowanikwa kwavari kutenderera-wachi. Kana mutengi wako akaona chibvumirano chekuchengetedza nenzira iyi, iwe unofanirwa kuvashandisa zvisirizvo uye nekukurumidza. Zvikasadaro, kuenda kwako muchibvumirano chekuchengetedza kunogona kureva kuguma kwehupenyu hwako sekuziva kwako.
Kuti udzivise chiitiko ichi chisingafadzi, iwe unofanirwa kuronga nguva yako uye kubata rako rekutakura basa nenzira kwayo. Rangarira kuti uyu mutengi haasi iye ega wauinaye, uye une chisungo kune vamwe vatengi vauri kushandira. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuronga yako nguva kuona kuti iwe unokwanisa kushandira vamwe vatengi uye kutora basa idzva uchiri kusangana nezvinotarisirwa nemutengi wako pane chengetedzo.
8. Maka kufambira mberi kwako: tumira mumishumo yenguva dzose
Kumhan'arira nezve basa rawakaita, uye budiriro yawakaita inoenda kure kure kuratidza vatengi vako kuti yavo sarudzo yekukuisa iwe pane yekuchengetedza inobatsira. Inopa humbowo kumutengi kuti vari kuwana iyo kukosha kwavakabhadhara.
Izvo zvirimo mushumo zvinoenderana nemhando yemasevhisi auri kuvapa. Iyo inofanirwa, zvisinei, inosanganisira yakambobvumiranwa pane Key Performance Index (KPI). Izvi zvinogona kuve indices senge
Chiyero chemagariro enhau
Nhamba yevaverengi veblog blog
Kuwedzera kunoyerwa mukutengesa
Nhamba yevateveri vewebhusaiti
Kuita kuti zvinhu zvinyanye kuve nani, edza kuenzanisa basa rako uye uchienzanisa mwero wekukura pamwedzi. Kana yako yakabvumiranwa-KPI yaive seti yezvinangwa zvakamisikidzwa, ratidza kuti wafambira mberi zvakadii mukuzadzisa zvinangwa zvakatemwa.
9. Ongororo dzakajairika
Chibvumirano chako chekuchengetedza chinofanira kusanganisira kuongororwa kwese nemutengi. Iwe unogona kugadzirisa wongororo pagore, pagore, pagore kana pamwedzi. Iwe unofanirwa zvakare kujekesa kumutengi kuti kana vakawana kusagutsikana mune chero chikamu chebasa rauri kupa, vanofanirwa kusvika kwauri nekukurumidza.
Ongororo hadzifanirwe kungoitirwa kana dzisingafadzi, asi nezve chiyero chose chebasa rauri kupa. Izvi zvinogona kusanganisira zvigadzirwa zvemusika zvinobatsira mutengi kana kumisa dzimwe nzira dzisingachashande mutengi - kungave nekuda kwekukura kana kushanduka kwemusika.
Kugadzirisa gakava chikamu chakakosha pazvibvumirano zvekuchengetedza uye hazvifanirwe kufuratirwa zvisinei kuti hukama pakati pako nemutengi hunoratidzika sei. Iwe unofanirwa kuisa chirevo pa kuti mapato ese angagadzirisa sei gakava rinomuka. Kune nzira ina dzakakosha dzaunogona kugadzirisa gakava. Vari:
Zvizhinji sezvinobvira, iwe unoda kudzivirira kukakavara. Saka iwe unofanirwa kusanganisira chirevo cheimwe nzira yekugadzirisa gakava yaungade.
Tora Chibvumirano Chekuchengetedza zvekunyora zvibvumirano muUAE
Kusarudza gweta kunogona kuita kana kutyora mutengi. Kana iwe uchida rubatsiro rwemutemo, zvakakosha kusarudza gweta rinopa sevhisi panguva yakakodzera, rinoziva mutemo, uye rinokupa chivimbo chekuti nyaya yacho iri mumaoko akanaka. Nepo ruzivo rwegweta uye magwaro akakosha, chakanyanya kukosha mhando yechibvumirano chauchazopinda negweta riya.
Chibvumirano chakabudirira chekuchengetedza chinoumbwa nezvakawanda zvikamu zvinogona kunge zvichinyonganisa kuti iwe utore. Magweta edu pa Amal Khamis Vamiriri vezveMutemo uye maAdvista inogona kukubatsira nezvinhu. Zvese zvaunoda kuti uite kupindura mibvunzo mishoma nezve zvaunofarira uye kusiira zvimwe zvacho kwatiri. Tambanudzira kwatiri nhasi uye tanga zvinhu kutanga.